Gịnị kpatara Ohu Chineke Luisa Piccarreta? - Ngụda na Alaeze ahụ
Ndị na-anụbeghị nnabata kwesịrị ekwesị maka mkpughe nke “Onyinye nke Ibi Ndụ nke Chi Nsọ,” nke Jizọs nyefere Luisa na-agbagha mgbe ụfọdụ banyere ịnụ ọkụ n'obi nke ndị nwere okwu mmeghe a: “N'ihi gịnị ka e ji kwusie nnọọ ike na ozi nke nwanyị a dara ogbenye si whotali nwụrụ n'afọ 70 gara aga?”
Nwere ike ịchọta ụdị mmeghe ahụ n'akwụkwọ, Okpueze nke Akụkọ ihe mere eme, Okpueze nke Nsọ, Anyanwụ nke uche m (nke Vatican bipụtara n'onwe ya), Ntụziaka maka Akwụkwọ nke Eluigwe (nke na-ebu imprimatur), ọrụ Fr. Joseph Iannuzzi, na ndị ọzọ. Nke a sitere Na Luisa na edemede ya:
Dika mkpughe nke ijuanya na ebere Chineke nke Jisos nyefere n’aka St Faustina mebere Mgbalị ikpeazụ nke nzọpụta tupu ọbịbịa ya nke ugboro abụọ n’amaraNkwa Ya maka mkpughe nke a ga - enyefe Ohu Chineke Luisa Piccarreta Mgbalị ikpeazụ nke ido nsọ. Nzoputa na ido-nsọ: udiri ihe abua kachasi nma nke Chineke nwere n’ebe umu aka ya huru n’anya. Nke mbu bu ntọala nke ndi ikpe azu; ya mere, odi nkpa na ekpughere nkpughe nile nke Faustina mbu; mana, n'ikpeazụ, Chineke chọrọ ọ bụghị naanị ka anyị nabata ebere Ya, kama ka anyị nabata ndụ nke Ya dịka ndụ anyị wee si dị ka Onwe Ya — enwere ike ọ bụla maka okike. Mgbe mkpughere nke Faustina, onwe ha, na-ekwu banyere ịdị nsọ ọhụrụ nke ibi ndụ na Uche Chukwu (dịkwa ka mkpughe nke ọtụtụ akụkọ omimi ndị ọzọ a nwalere na nso nso 20)thnarị afọ), a hapụrụ ya Luisa ka ọ bụrụ onye nkwuputa izizi na “odeakwụkwọ” nke '' ịdị nsọ a dị nsọ '' (ka Pope St John Paul II kpọrọ ya).
N’ebe mkpughari nile nke Luisa bu nke oma (Nzuk o meela ka nke a guzosie ike na ha ugbua), n’agbanyeghi nke ahu, ha n’egosiputa ihe bu, n’ezoputa ya, ozi kacha di egwu nke mmadu puru iche. Ozi ha dị egwu nke na-enweghị obi abụọ bụ ọnwụnwa a na-agaghị echefu echefu na ịnabata ya ga- ka a kpọọ maka, mana maka eziokwu ahụ enweghị ike ịnwe obi abụọ ọ bụla maka izi ezi ya. Ozi ahụ bụ nke a: mgbe nkwadebe afọ 4,000 gasịrị n'ime akụkọ ntolite nzọpụta na afọ 2,000 nke nkwadebe dị egwu karị n'ime akụkọ ihe mere eme nke Chọọchị, Nzukọ-nsọ ​​adịla njikere ịnata okpueze ya; o jikerela ịnata ihe Mụọ Nsọ nọ na-eduzi ya oge niile. Ọ bụghị nanị ịdị nsọ nke Iden n'onwe ya — ịdị nsọ ahụ nke Meri, nwekwara ọ inụ n'ụzọ zuru oke karịa nke Adam na Iv—ọ dị ugbu a maka ịrịọ arịrịọ. A na-akpọ ịdị nsọ a “Ibi Ndụ Dị Nsọ.” Obu amara nke amara. Ọ bụ imezuzu ekpere nke "Nna anyị," na mkpụrụ obi, ka eme uche Chineke n'ime gị, dịka otu ndị nsọ nọ n’eluigwe si eme ya. Ọ naghi agbanwe ọ bụla ofufe na omume ndị dị ugbua nke Eluigwe na-achọ n'aka anyị - ịgagide Sakraị, ikpe Rosary, ibu ọnụ, ịgụ Akwụkwọ Nsọ, ido onwe anyị nsọ na Meri, na-arụ ọrụ ebere, wdg - kama, ọ na-eme ndị a. na -akpọ ngwa ngwa ma dị elu, n'ihi na anyị nwere ike ịme ihe ndị a niile n'ụzọ nkewa.
Okwu ndị a ka Jizọs na-arịọ anyị ka anyị nwee mgbe niile n'uche, n'obi na n'egbugbere ọnụ anyị. (Lee Na Luisa na Ihe Odide Ya na mkpirisi mkpirisi banyere akụkọ omimi dị ịtụnanya nke Luisa na ọnọdụ nke ihe odide ya ugbu a).
Ozi si na Ohu Chineke Luisa Piccarreta
Luisa - General ọgba aghara
M ga-eme ka ụwa dị ọhụrụ site na mma agha, ọkụ, na mmiri ...
Na Luisa na Ihe Odide Ya
Nkwusa maka oge ndị a.
Luisa - Ọrụ nke Mmụọ Ime
Enweghị izi ezi, ọrụ anyị anwụọla.
Luisa na Wardọ Aka ná Ntị
Mụ nwoke ga-ahụ onwe ha ka ndị furu efu.
Wardọ aka na ntị ahụ ga-eburu Ngọzi.
Luisa - Mba di iche iche gha adighi nma
Ime ihe megide onwe ha!
Luisa - Nchedo Chi
Na-ebi Ndụ M na-atụ egwu ihe ọ bụla.
Luisa - Ha Na-erubere Ndị Ọchịchị Isi, Ma Ọ bụghị M
Ha na-anọgide na-enweghị mmasị.
Luisa - M ga-etigbu ndị isi
Ole na ole na ole foduru ga-ezu iji gbanwee ụwa.
Luisa Piccarreta - Ka anyị lelee anya
Hụ ka e wughachiri Alaeze m, esi m n'oké mwute pụọ gaa na nnukwu ọ ...ụ ...
Oge Mweghachi nke Eluigwe na Ala
Kpo ọbịbịa nke Alaeze ahụ ga-adabere na gị.
Luisa Piccarreta - Onye Biri n’uche M Ga-akpọlite
You chọrọ ịma mgbe ezigbo mbilite n'ọnwụ nke mkpụrụ obi ga-eme?
Ọhụrụ na Nsọ
Abia nke ala eze Chineke n’uwa, na nmezu nke Ekpere Nna anyi n’onwe ya abughi ihe n’eji eme uwa nma mara nma karie nma - n’agbanyeghi na mgbanwe ahu gha aghaghi ime. Obu isi n’odi nso.
Luisa Piccarreta - na-eme ka ọbịbịa nke alaeze ahụ ọsọ ọsọ
Jizọs dụrụ Luisa na anyị niile ọdụ, sị: "Ya mere, gịbụ kpee ekpere, ka mkpu gị na - aga n'ihu: 'Ka alaeze Fiat gị, Ka eme uche gị n'ụwa dịka ọ dị n'Eluigwe.'"
Luisa Piccarreta - Enweghị atụ egwu
Jizọs gosipụtara ọhụụ a nye Luisa banyere nchebe pụọ n’Ọrụ Ndị A Na-eme Mgbasa: “[Nwanyị anyị] gagharịrị n’etiti ihe ndị ahụ e kere eke, na mba niile, ma gosipụtaara ụmụ ya ọ hụrụ n’anya na ndị ihe otiti ahụ agaghị emetụ ha. Mama nwa anadịghị emetụ, ihe otiti ahụ enweghị ike imetụ ihe ndị ahụ e kere eke. Jizọs dị ụtọ nyere nne ya ikike iwebata onye ọ bụla masịrị ya.
Luisa Piccarreta - Oge nke Lovehụnanya Chineke
N'ihe dị ka Oge a ga-amalite ụwa nile, Jizọs kpughere Luisa: "A ga-agbanwe ihe niile ... Uche m ga-egosipụta nnukwu ihe, ka ọ bụrụ nke ị ga - enwetacha ọhụụ nke ịma mma dị egwu a na - ahụtụbeghị mbụ, maka ụwa niile. Eluigwe na ụwa niile. "
Luisa Picarretta - Na Chastisements
Jizọs gwara, sị: Nwa m nwanyị, ihe ọ bụla ị hụrụ [Iwu ụlọ] ga-abụ nke sachara ma kwado ezinụlọ nke mmadụ. Ọgba aghara…
← Gịnị kpatara ọhụụ anyị
Gịnị kpatara Martin Gavenda? →